देशको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडे ! ३ वर्षअघि ट्रम्पको पालमा अमेरिकामा जस्तै अवस्था – Janadesh Daily | ePaper
देशको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडे ! ३ वर्षअघि ट्रम्पको पालमा अमेरिकामा जस्तै अवस्था
September 15, 2021 September 15, 2021 by Jandesh Daily
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि देशमा पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन बजेट पास गर्न नसक्दा अब बुधबारदेखि (आजदेखि) नियमित खर्च रोकिनेछ ।
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्था आएको छ । नयाँ गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट बनाएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन नगरेको भए त्यो अध्यादेश पनि बुधबार निस्कृय हुने थियो । अध्यादेश पनि निस्कृय भएको र नयाँ विधेयक पनि पारित नभएको स्थितिमा अब बुधबारदेखि बजेट खर्च रोकिने अवस्था आएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याए पनि पास गर्ने समय नपुग्दा बजेट खर्च रोकिएको हो । सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर बजेट ल्याउन खोजेको थियो । तर प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध गरेपछि नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएको हो । यसको असर बजेट खर्चमा देखिएको छ ।
जेठ १५ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारण अध्यादेशको बजेट संसदमा पास भएन । अध्यादेशबाट आएको बजेट ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर बजेट पारित हुनुपर्ने समय भदौ ३० सम्म भएकाले सरकारले समेत संसद अवरोधकाबीच बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेको थियो । एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नुभएको थियो । नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकसमेत संसदबाट पास नहुँदा अबको केही दिन सरकारले खर्च गर्न सक्ने छैन । राजस्वमा भने पुरानै कर दर लागु हुने छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भए पनि मंगलबारको बैठकले प्रतिस्थापन विधेयक विचार गरियोस भन्ने सैद्धान्तिक प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत गरेको छ । तर पास हुन अर्को संसद बैठक कुर्नु पर्ने भएको छ र अर्को बैठक असोज ४ गते मात्र बस्ने छ । त्यसैले यो बिचमा बजेट खर्च नहुने भएको हो ।
अब के हुन्छ !
प्रतिनिधिसभाले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द हुने भएको छ । अब सरकारले करमात्र उठाउन सक्छ, खर्च गर्न सक्दैन । यसअघि ल्याएको बजेट अध्यादेश संसद्‌ चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ६० दिनको समय बुधबार सकिँदैछ ।
बजेटबारे कुनै व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक निकाय बन्द गर्नुपर्ने र ‘बजेट होलिडे’ तर्फ मुलुक जाने पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘अमेरिकामा तीन वर्षअघि बजेट पास नभएर मुलुकका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिएजस्तै अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्दा संसद्‌मा तोकिएकै मितिमा बजेट पास हुन नसकेर सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेपछि ३५ दिन सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए । ‘यही भदौ ३० भित्र बजेट पास नभए हाम्रोमा पनि हुने यस्तै हो,’ सुवेदीले भने ।
कसरी आयो यस्तो अवस्था !
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन ३ गतेको संसद्‍मा पेस गरेका थिए। यसरी संसद्‍मा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार बुधबार (भदौ ३०) सम्म बजेट संसद्‍बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो। तर, भदौ २३ गतेबाट सुरू भएको संसद्‍ अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निरन्तर अवरोध गर्‍यो। अवरोधकैबीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्‍मा प्रस्तुत गरे पनि पारित हुन सकेन। एमालेको अवरोधका कारण संसद्‍ बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यससँगै सरकारले बुधबारबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको हो।